Guardiola oo hogaaminaya 8-da macalin ee ugu mushaarka badan aduunka | Sports, Ciyaaraha Caalamka iyo gudaha	SOOMAALIDA MAANTA
Guardiola oo hogaaminaya 8-da macalin ee ugu mushaarka badan aduunka
Majalada ‘Sports’ ee ka soo baxa Spain ayaa soo saartay liiska 8-da Tababare ee ugu mushaarka badan caalamka, waxaana ugu horreeya Guardiola oo heshiis ku eg illaa 2016-ka la gaaray kooxda Bayer Munich oo sanadkii mushaar ahaan u qaadan doona 17-Milyan oo Euro (23-Milyan oo Dollar).
Booska labaad ee sheekadan waxaa galay Jose Mourinho oo sanadkii jeebka ku shubta 15.3-Milyan oo Euro Euro, halka kaalinta 3-aadna uu ku jiro tababaraha Paris Saint-Germain Carlo Ancelotti oo sanadkii qaata 13.5-Milyan oo Euro).
Sida ay warbixintu sheegeyso Kaalinta 4-aad waxaa fadhiya tababare Marcelo Lippi oo 10-Milyan oo Euro ka qaata Guagzhou ee Shiinaha.
Boosaska 5-aad iyo 6-aad waxaa kala galay Tababaraha Man United Alex Ferguson (9.4-Milyan Euros) iyo macallinka Arsenal, Arsene Wenger oo isna qaata 9.3-Milyan sanadkii.
Booska 7-aad ee macallinka ugu mushaarka badan caalamka waxaa ku jira Guus Hiddink oo layliya kooxda Anzhi Makhachkala oo qaata 8.3-Milyan Euros, halka kaalinta 8-aadna uu galay tababaraha kooxda barcelona Tito Vilanova oo qaata 7-Milyan oo Euro sanadkiiba.
1 Comment for “Guardiola oo hogaaminaya 8-da macalin ee ugu mushaarka badan aduunka”
Nimco xusen gurey	19/01/2013 - 4:08 am	Wan idin salamay dhaman aq yaarta aad ayan ugu faraxsanahay in tababaraha arsenal arsen wenger uu ka mid noqdo tababarayaasha ugu musharka badan calamka waayo aad ayan u taageeraa isaga iyo kooxda uu leyliyo e arsinal